"Doolliga iyo Xasharaadka Ayaan Cuni Jirnay Xilligii aan u qafaalnayn Kooxaha Burcad Badeedda Soomaalidya" Sidaas Waxaa Yiri Muwaadin Filibiini Ah.
Monday October 24, 2016 - 06:16:11 in Wararka by Super Admin
Kooxo Badmaaxiin ah oo maalmo lagasii daayay gacanta kooxo Burcad Badeed Soomaali ah ayaa ka sheekeeyay tacadiyaddii ay la kulmeen sanadadii ay gacanta burcadda kujireen.
Magaalada Nairobi ayaa lagasoo bandhigay 26 Nin ajaanib ah oo Afar sanadood ka hor ay gacanta ku dhigeen xoogaga ka qaraabta Badda ee reergalbeedku u bixiyeen Burcad Badeedda.
Dadka lasii daayay oo kasoo jeedo wadamo dhaca qaaradda Asia sida Kaamboodiya, Shiinaha,Filibiin Taaywaan iyo Fiyatnaam ayaa warbaahinta u sheegay dhacdooyin yaab leh oo ay adag tahay sida loo rumeysto.
Muwaadin u dhashay dalka Filibiin ayaa BBC-da u sheegay in intii ay gacanta Burcad Badeedda kujireen ay cuni jireen Jiirka ama Doolliga si ay noloshooda u maareeyaan.
Wuxuu sheegay in biyo ka yar ay laba Liitar ay cabayeen wax kabadan isbuuc wuxuuna kooxihii gacanta ku hayay ku tilmaamay manaxayaal aan nolol u ogoleyn Bani’aadamka.
"waxaan cuni jirnay doolliga si aan usii noolaano afartii sanadood ee aan gacanta ugu jirnay Burcad badeedda soomaalida” sidaas waxaa yiri mid kamida dadkii lagasoo badbaadiyay kooxaha ka qaraabta badda Soomaaliya.
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri "aniga iyo saaxiibadeey biyo yar ayaan cabi jirnay maalmaha qaar, jirkeena waa daciifay waxaanba is moodnay kuwa dhintay dhibaatada nahaysatay aawgeed”.
Markabka FV Naham 3 ayay dagaalyahano burcad badeed ah gacanta ku dhigeen sanaddii 2012 xilli uu marayay meel ku dhow Jaziiradda siishalis, markabka waxaa ka babanayay calanka dowladda Cummaan balse waxaa laheed shirkad laga leeyahay dalka Taywaan.
Mas’uul u hadlay shirkadda ay u shaqeynayeen shaqaalaha lasii daayay ayaa sheegay in lacag dhan sedax Milyan oo dollar madax furasho ahaan loosiiyay kooxaha Burcad Badeedda oo larumeysanyahay in ay ajaanibta ku heysteen bartamaha dalka Soomaaliya.
Isha warka BBC Arabic